China Ọwara n'ekwú ọkụ na-emepụta na suppliers | Onye na-eme brik
Gịnị bụ ọwara n'ekwú ọkụ? Na-aga n'ihuọrụeme kiln dị ka ọwara. Ihe mejuputara ya bu ite oku, akuku oku (ngwa), ihe ikuku, oku na oku. Onye na-acha brik na-acha akwụkwọ ndụ na-abanye site n'otu nsọtụ n'usoro, ma si na nsọtụ ọzọ pụọ mgbe mpaghara atọ nke preheating, firing and jụrụ.
Ikuku ikuku na-abụghị nke na-agba ọsọ nke ụgbọ ala ọkụ nke na-acha akwụkwọ ndụ brik na-acha akwụkwọ ndụ. Anwụrụ sistemụ (mgbe asachachara ya) na ikuku. Mgbe ikuku oyi na-abanye n'ekwú ahụ site na njedebe nke mpaghara dị jụụ na-eme ka ngwaahịa ahụ dị jụụ, ọ na-ebu ọkụ ma nwee ike iji ya dị ka ikuku ọkụ ma ọ bụ wepụ ya dị ka onye na-akpọ nkụ. Enweghị nchekwa nchekwa ọkụ na mgbidi kiln na ụlọ (n'ihi nkwụnye ọkụ na-agbanwe agbanwe). Ihe ndị bụ isi bụ: ọkụ ọkụ dị ala, mmepụta dị elu, ogo kwụsiri ike karị, ọnọdụ ọrụ ka mma, yana igwe ọrụ na akpaaka dị mfe. Agbanyeghị, ọwara igwe nwere ọwara dị elu nke ukwuu nwere nnukwu ihe dị iche n'etiti okpomọkụ dị n'etiti n'akụkụ elu na nke ala, nke ga-emetụta ogo ngwaahịa ahụ na ịgbatị oge ọgbụgba ahụ.
Ọrụ Kiln maka brik ihicha & firing
Akụrụngwa Kol, Nnukwu ọrụ mmanụ, Gas
Workingkpụrụ ọrụ Esịtidem / Mpụga ọkụ na ihicha
4.0 ~ 5.0M
5.0 ~ 7.0M
7.0 ~ 10.0M
Obosara dị n'ime
PC / ụbọchị
Usoro ọrụ nke olulu ọwara na-ezo aka n'ụzọ na-agagharị nke ikuku na ikpo ọkụ ahụ, gụnyere sistemụ ikuku, usoro na-agwụ anwụrụ ọkụ, na ịla n'iyi usoro iji ọkụ. Igwe na-ekpo ọkụ nke ọwara ọkụ na-ezo aka na nkesa okpomọkụ na ogologo nke oku, usoro nkesa nrụgide na ihe ikuku chọrọ nke mpaghara ọ bụla. A na-ekpebi usoro okpomọkụ site na usoro chọrọ nke kpo oku ngwaahịa. Iji hụ na mmezu nke sistemụ ọkụ, sistemụ arụmọrụ kwesịrị ekwesị ga-adị, nke na-ekpebi usoro nke ikpo ọkụ ahụ, akụrụngwa inyeaka na nhazi pipeline. Yabụ, ma sistemụ ọrụ ọ nwere ezi uche ma ọ bụ na ọ na-emetụta ọwara nchịkwa ọkụ, mmepụta, ogo na oriri ike.
Nke gara aga: Ugboro abụọ nkuku Robot brik stacking System
Osote: OA Asambodo China Brik Machine GGD Sistem Nkesa Ike